E-mail: info@camtechcircuits.com Telefoon: +86 13713989501 Waan la sheekaysanaa: +86 13713989501
Gawaarida, caafimaadka & Guddiga PCB aerospace
Isgaarsiinta PCB Wareegyada
Macaamiisha Korontada PCB
Xakamaynta Warshadaha PCB
Wareegyada PCB-ga Amniga
Adeeg & Guddiga Keydka Kombuyuutarka
Qaar kale PCB
Waxaan ku guuleysanay shahaadooyin badan oo alaabtayada ah xagga tayada iyo hal-abuurnimada.
CAMTECH PCB waa bixiye PCB caalami ah, xirfadle ah oo lagu kalsoon yahay oo leh saldhig wax soo saar u gaar ah oo ku yaal Shenzhen, Zhuhai China, kaas oo diiradda saaraya dhoofinta PCBs inta badan suuqa Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. CAMTECH PCB wаѕ oo la aasaasay 2002, wuxuu leeyahay saddex wershadood oo casriyeyn ah PCB iyo FPC oo ku yaal Shenzhen, magaalada Zhuhai, oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 3000 oo shaqaale, awoodda wax soo saar ee sannadlaha ah ayaa ka badan 1500,000 m². Awoodda iyo ilaha dhexe ee maxalliga ah, waxaan awood u leenahay inaan ku siino adeeg hal-joogsi ah oo leh wax-soo-saar yar, mid dhexdhexaad ah oo ballaaran oo leh shuruudaha tartanka, tayada iyo hubinta bixinta ee habeeyay dhammaan codsiyadaada.
& difaaca, xakamaynta warshadaha, isgaarsiinta, qalabka caafimaadka, qalabka korontada, iwm. CAMTECH PCB wuxuu ku guuleystay aqoonsi sare macaamiisha adduunka.
Ka sokow, waxaan haynaa koox farsamo oo khibrad iyo khibrad leh si ay kuu taageeraan qiimeynta adeegga lagu daray ee PCBA SMT iyo BOM. Waxaan ku taageeri karnaa wax soo saarka dhexdhexaadka-dhexdhexaadka ah si habsami leh jawaab deg deg ah iyo adeeg xirfadeed.
In Loo Soo Bandhigo Alaabo Wareeg Taag Daabacan Iyo Adeeg Qanciya Oo Loo Fidiyo Warshadaha Korontada Iyo Macluumaadka
Si aad u noqotid soo saaraha guddiga wareegga daabacan ee adduunka ugu kalsoon
Qiyamkeena asaasiga ah
Ujeeddada Macaamiisha Creat Daryeelayaasha Qiimaha Daryeelaha ah 、 Is-milicsi rity Daacadnimo
Mas'uuliyadda 、 Wadashaqeynta 、 Hal-abuurnimo
Dadku waxa ugu horreeya, soo saarista wax soo saarka tartanka, ballaarinta shirkadda, iyo dib u bixinta bulshada
Waxaa naga go'an inaan soo saarno badeecadaha ugu tayada fiican qiimaha ugu tartanka badan. Sidaa darteed, waxaan si kal iyo laab ah ugu martiqaadaynaa dhammaan shirkadaha xiisaynaya inay nala soo xiriiraan wixii macluumaad dheeraad ah.